Pence oo Amaanay 'Islaamka Qunyar socodka' Indonesia
Pene iyo Widodo
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa amaanay wax uu ugu yeeray “dhaqanka islaamka qunyar socodka” ah ee dalka Indonesia, isaga oo booqday dalkaasi oo uu wada hadal kula yeeshay madaxweyne Joko Widodo iyo saraakiisha Ururka Dalalka Koonfur Bari Asia.
“Innaga oo ah dalalka labaad iyo saddexaad ee ugu dimoqraadiyadda ballaaran dunida, labadeena dal waxay wadaagaan qayim guud, oo ay ku jiraan xoriyadda, sharciga, xuquuqda aadanaha iyo kala duwanaashaha diimaha, Mareykanka wuxuu ku farxasan yahay inuu Indonesia kala shaqeeyo ilaalinta qayimkan” Ayuu yiri Pence.
Waxa uu sidoo kale adkeeyey baahida loo qabo xoriyadda aas-aasiga ah, wuxuuna intaas ku daray in isaga iyo madaxweyne Trump ay doonayaan inay ballaariyaan xiriirka dhaqaale ee ay la leeyihiin Indonesia.
“Hoggaanka madaxweyne Trump, wuxuu Mareykanka u raadin doonaa xiriir ganacsi oo xor iyo dhexdhexaad ah” ayuu yiri Pence.
Ayada oo ay qeyb ka tahay safarkiisa magaalada Jakarta, Pence ayaa waxa uu sidoo kale booqday masjidka Istiqlal oo ah masjidka ugu weyn Koonfur Bari Asia, isaga oo halkaas kula kulmay hogaamiyayaasha diimaha kala duwan.